जान्नुहोस् ! यस्ता छन् पारासिटामोल प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु
फ्रेवुअरी 6, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	8 Comments औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा, पारासिटामोल
पारासिटामोल (Paracetamol) औषधिको बारेमा नजान्ने को होला तर जान्ने व्यक्तिलाई दुईवटा कुरा थाहा छ त्यो हो यो औषधि खाएपछि ज्वरो कम हुन सक्छ । ज्वरो कम त हुन सक्छ तर यसले कालान्तरमा गएर अन्य समस्या निम्ताउन सक्छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । आज हामीले यही विषयमा पाठकलाई जानकारी पस्कने छौं ।
सवैभन्दा सजिलै प्रयोग गर्न सकिने औषधि Paracetamol यो औषधि ५०० मिलि.ग्रामको रूपमा थुप्रै कम्पनीले उत्पादन गरेको छ । यो औषधि टेब्लेट, सिरप र ड्रोप्सको रूपमा बजारमा आएको छ । आजकाल यो औषधि किराना पसलमा पनि विक्रि हुने गरेको सुनिन थालेको छ ।
यो औषधि प्रयोग गर्दा के कस्ता समस्या निम्तन सक्छ भन्ने कुरा हरेकले जान्न आवश्यक छ । आजकाल मागेर खाने औषधिमध्ये सिटामोल (Paracetamol) प्रमुख औषधि अन्तर्गत पर्दछ । किनेर खादा यो औषधि अत्यधिक प्रयोग गर्दा के हुन सक्छ भन्ने कुरा हरेकले जान्न जरूरी छ ।
Paracetamol टेब्लेट नॉन स्टेरॉडल एंटी-इनफ्लेममेटरी ड्रग्स (NSAID) अन्तर्गत पर्दछ । Paracetamol को प्रयोग ज्वरो र दुखाई कम गर्न प्रयोग हुन्छ । जस्तोसुकै ज्वरो किन नहोस् यो औषधि दिनासाथ निको हुने गरेको छ । Paracetamol को Side Effects मध्ये सुनिनु, रातो रातो डाबर जस्तो शरीरमा देखिनु, सास फेर्न गार्हो हुनु, रगतको कमी हुनु, जण्डिस आदि समस्या प्रमुख रुपमा देखा पर्छन ।
यो औषधि गर्भवती महिलालाई दिन सकिन्छ यसले खासै असर गर्दैन तर ड्रग्स यलर्जीक हुने, किड्नीको समस्या भएका बिरामी, कलेजो सम्बन्धी रोग जस्तै जण्डिस छ भने र रक्सीको लत लागेको व्यक्तिलाई यो औषधि दिनाले खतरा हुन सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
एक पटकमा बढीमा १००० एम.जीसम्म ठूलो मानिस (Adults) लाई दिन सकिन्छ । यो औषधि हरेक ६/६ घण्टाको फरकमा दिनुपर्दछ । बच्चाहरुलाई उनीहरूको तौलको आधारमा मात्रा निर्धारण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । पारासिटामोल बढी दिनसम्म नदिनु राम्रो हो दिन आवश्यक देखिएमा आफ्नो चिकित्सकसंग परामर्श लिन आवश्यक हुनसक्छ । औषधिको सेवन जथाभावी गर्नु भनेको शरीरसंग खेलवाड गर्नु हो ध्यानमा राखौं ।
कब्जियत र यसको उपचार
पिसाब चुहिने समस्याको उपचार
कम्मर दुख्दा गर्नुपर्ने योग आसनहरूनसा च्यापिने समस्या र यसको उपचार
← औषधि Azithromycin (Anther) को प्रयोगवारे एक जानकारी
नाइट्रस अक्साइडलाई किन लाफिङ्ग ग्यास भनिन्छ ? →
जनवरी 7, 2019 जनवरी 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
फ्रेवुअरी 15, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक 8
8 thoughts on “पारासिटामोल प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु”
Pingback:क्यालसियम डोविसिलेट (डोबिक्याल) Calcium Dobesilate (Dobical) र यसको प्रयोग
Pingback:एन्टीकोल्ड ट्याब्लेट (Anti-Cold Tablet) साइनेक्स (Sinex) र यसको प्रयोग
Pingback:सुपर सि भि ६२५ Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets को प्रयोग
Pingback:आईपड सि भी-२०० (Cefpodoxime Proxetil and Potassium Calavulante Tablet) को प्रयोग
राती सुत्नुअघि पालना गर्नुपर्ने सामान्य नियमहरु